Dwelisa ishishini lakho kunye neBing Business Portal | Martech Zone
ukusukela Uphando ungumnini wentengiso enkulu, sihlala sigxila kubo kancinci. Nangona kunjalo, Bing ithathe kancinci isabelo sentengiso kwaye iphume kunye nezinye izinto ezizodwa ezikhethekileyo- kubandakanya i-Android kunye ne-iPad. Ezinye zeempawu zeso sicelo kunye nesiza se-Bing ngokwaso bezihle kangangokuba siye sabukela uGoogle boleka kwaye baphucule eyabo injini yokukhangela ngendlela efanayo.
Imephu yeBing intle kwaye ukuthandwa kwayo kuyakhula. I-Bing isungule IBing Business Portal ukuba amashishini abhalise ishishini labo kwaye lomelele kakhulu.
Ndibhalile ngokubaluleka kophendlo lwasekhaya kwaye ukubhalisa kwinkonzo zeshishini zikaGoogle. Umnikelo we-Bing ulungile ngokunjalo, kwaye unezongezo ezongezelelekileyo-ezinje ngeembono zeselfowuni kunye neeKhowudi zeQR. Iindawo zokutyela kunye nemivalo zinokukwazi Qhagamshela okanye ubandakanye iimenyu zabo.
Kuba ukubhalisa kwi-Bing Business Portal kusimahla, ayisiyongqondo yamashishini ukubanga uluhlu lwabo kunye nokuphucula iprofayile yeshishini labo kwi-intanethi. Ubhaliso lwalulula kwaye ndafumana ikhadi ngeposi kunye nePIN khowudi kwiiveki ezimbalwa. Ndaye ndakwazi ukungena ngemvume, ndongeza i-logo yethu kwishishini lethu, kwaye ndigcwalisa lonke ulwazi oluyimfuneko lwe-portal ukupapasha ishishini lethu. Yiba nomonde-uluhlu lwakho aluzukuvela kwangoko kwiziphumo zokukhangela.
tags: AOLapuidon wettrickUmbutho weHlabathi woLungiso lweNtengiso yeDijithaliukwenzainzuzo